Shantui Janeoo dia manolotra tetik'asa fanamboarana lalamby Shiheng Canggang | Shantui
Vao tsy ela akory izay, ny seta enina an'ny SjHZS240-3R zana-kazo fampifangaroana izay ampiasain'i Shantui Janeoo amin'ny fanamboarana ny lalamby Intercity Shiheng-Canggang dia napetraka ary natolotra am-pahombiazana tamin'ny mpanjifa.
Ny fitaovana rehetra dia mandray ny firafitry ny silo vita amin'ny simenitra, ary ny fitaovana tsirairay avy dia manana silo simenitra milanja 500 taonina ho silo kely, izay mampitombo be ny fahasarotana amin'ny fananganana. Nandritra ny vanim-potoanan'ny fananganana dia fotoanan'ny orana io ary feno fotaka ilay toerana. Mba hiantohana ny vanim-potoanan'ny fanamboarana, matetika ny mpiasan'ny serivisy dia nanao palitao sy baoty hanaovany fananganana amin'ny orana, tena nampihatra ny kolontsaina mahomby "iray andro raha roa sy sasany sy sasany andro" miaraka amin'ny hetsika azo ampiharina. Miaraka amin'ny ezaky ny mpiasan'ny serivisy tsy an-kijanona, ny vokatra dia natolotra ny mpanjifa manana kalitao sy habetsahana azo antoka, ary salama tsara izy ireo ankehitriny.
Voalaza fa ny Shiheng-Canggang Intercity Railway dia andalana lehibe amin'ny fandrafetana ny tambajotram-pifandraisana any Beijing-Tianjin-Hebei. Zava-dehibe amin'ny fanamboarana ny taolana lehibe efatra mitsivalana sy efatra mitsivalana amin'ny tambajotram-pifandraisana any Beijing-Tianjin-Hebei, ary fifamoivoizana adiny iray avy any Shijiazhuang, renivohitry ny faritanin'i Hebei, hatrany amin'ireo tanàna lehibe manodidina. Misy dikany lehibe ny mahatsapa ny fifandraisana haingana eo atsimoatsinanan'i Hebei sy Tianjin sy ny sisa; mahafeno ny filan'ny fifanakalozana fivezivezena amin'ny mpandeha amin'ny tanàna sy tanàna manamorona ny zotra ary manatsara ny rafitra fanangonana sy fizarana seranana.